Wararka Maanta: Arbaco, Jun 9 , 2021-Somaliland oo u jawaabtay wasiirka haweenka dowlada Soomaaliya oo sheegtay in doorashooyinkii Somaliland aan loo dhamayn
Wasiirada ayaa sheegtay in wasiirka haweenka Soomaaliya aanu masuul ka ahayn haweenka Somaliland.
“Soomaaliya iyo Somaliland shaqo iskuma laha, Soomaaliya waa waddan aanu mar hore kala tagtay, waxan u arka uun in riyadii ay reer Soomaaliya ku riyoon jireen uun in gabadhaasi ay ka hadashay” ayay tidhi.
“Way riyoonaysa, malaha waxay u haysataaba in ay haweenka Somaliland wakiil ka tahay” ayay hadal keeda sii raacisay.
Wasiir ku xigeenka ayaa sheegtay in wasiirada haweenka Soomaaliya anay wali fahmin in Somaliland ay madax banaantahay.
“Wali may fahmin in Somaliland ay tahay qaran madax bannaan, marka murankii Soomaaliya ka jiray uunbay gabadhaasi ka hadashay” ayay tidhi.
Wasiir ku xigeenka ayaa sheegtay in Somaliland tahay meel sharci leh, oo qofku wax dooran karo lana dooran karo, isla markaana Soomaaliya anay ahayn meel doorasho lagu gali karo.
“Somaliland waa meel sharci leh oo dastuur leh, oo qaran leh, qofka muwaadin ka ahi waxna wuu dooran kara waana la dooran kara, kootada iyaga waxa ku kalifaya waa dhul nabadi anay ka jirin, oo aan la odhan karin waa dowlad” ayay tidhi
Hadalka wasiir ku xigeenka ayaa yimid kadib markii wasiir ka haweenka dowlada Soomaaliya Xaniifa Xaabsade, ay sheegtay in doorashooyinkii Somaliland aan loo dhamayn madama oo dumar badani kusoo bixin doorashooyinka.